MMEMME IJI MEE KA ỌSỌ ỌSỌ NKE INTANET - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Mmemme iji mee ka ọsọ ọsọ nke Intanet
Ụkpụrụ nke onye inyeaka
Ụlọ ọrụ ahụ kwuru na "Alice" ọ bụghị nanị maara otú e si emeghachi omume na arịrịọ ndị dị ka: "Ebee ka ATM dị nso?", Ma ọ nwere ike ịkọrọ onye ahụ okwu. Ọ bụ kpọmkwem nke a bụ ọnọdụ ndị nwere ọgụgụ isi ọ bụghị naanị dị ka teknụzụ nke nwere ihe ngosi, ma dịka ihe nwere ike, nke bụ nṅomi nke mkparịta ụka ụmụ mmadụ. Ya mere, n'ọdịnihu, ndị na-akwọ ụgbọ mmiri ga-eji usoro dị otú ahụ mee ihe, iji nwee ike ịlụ ọgụ ụra n'azụ wheel, ga-ekwurịta okwu na bot.
A na - enyekwa nkọwa nke ihe ndị metụtara semantic na nnyemaaka. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịsị: "Kpọọ Vladimir", usoro ahụ ga-aghọta na nke a bụ onye, ​​na nkebi ahịrịokwu "Otu esi aga Vladimir" - ihe obodo ahụ pụtara. Tinyere ihe ndị ọzọ, na onye inyeaka ị nwere ike ikwu banyere ndụ na omume ọma. O kwesiri iburu n'obi na oru Yandex meputara nke oma.
Kwalite nghọta olu onye ọrụ
Nke mbụ, onye inyeaka nwere ike ịnakwere okwu mgbe onye ahụ na-ekwu okwu ezughị ezu ma ọ bụ na o nweghị nke ọma. E mepụtara ya ọ bụghị nanị na ebumnuche nke imeziwanye ngwaahịa zuru ezu, ma na ụzọ nke ya, ọ na-edozi nsogbu maka ndị nwere nsogbu nkwarụ. AI na-emeziwanye, na nke a, ọ na-enyere aka nyochaa ihe ndị dị na nkwupụta nke mbụ ahụ site n'ji. Ọ na-enye gị ohere ịghọtakwu onye ahụ ma nye azịza ziri ezi maka ajụjụ ya.
Egwuregwu na AI
N'agbanyeghị nzube ya, na-egosi na ị nwere ike ịza azịza ọsọ ọsọ dabere na yandex search engine, ị nwere ike igwu egwu Alice. N'etiti ha, "Guess the song", "Taa na akụkọ ihe mere eme" na ọtụtụ ndị ọzọ. Iji mee ka egwuregwu ahụ rụọ ọrụ, ịkwesịrị ikwu okwu ahịrịokwu kwesịrị ekwesị. Mgbe ị na-ahọrọ egwuregwu, onye inyeaka ga-agwa iwu ndị ahụ n'enweghị ihe ọ bụla.
Nhazi usoro okwu
SpeechKit bụ nkà na ụzụ maka iji nyocha ndị ahịa. Na isi ya, a na-ekewa ihe niile a chọrọ ka ọ bụrụ ebe abụọ: ajụjụ ndị nkịtị na geodata. Oge amara bụ 1.1 sekọnd. Ọ bụ ezie na ihe ọhụrụ a etinyewo n'ọtụtụ mmemme ebe ọ bụ na afọ 2014, ọbịbịa ya na ngwa ngwa okwu mkparịta ụka ọhụrụ dị oké mkpa. Mmeghe ngwa ngwa bụ ụzọ ọhụrụ iji mee ka njikwa ngwaọrụ ngwaọrụ. Ya mere, "Alice", mgbe o mechara rịọ arịrịọ ahụ, jikọta ahịrịokwu ahụ na iwu kpọmkwem na smartphone ma mebie ya, ebe AI na-arụ ọrụ n'azụ.
Onye inyeaka na-eji olu onye na-eme ihe nkiri Tatiana Shitova. Eziokwu na-adọrọ mmasị bụ na atụmatụ ndị ahụ gụnyere ụda dị iche iche nke na-egosi mgbanwe nke mkpesa. Ya mere, nkwurịta okwu na-aghọ ihe ezi uche dị na ya, na-enweghị nghọta ihe ị na-agwa robot.
Enyemaka ngwa na mpaghara dị iche iche
Ụlọ ọrụ na-emepụta ngwá ọrụ na-elekwasị anya n'iji AI eme ihe n'ọhịa ya, ya mere ntinye aka nke IT na-enyere ya aka n'akụkụ a. Site na nchịkwa kọmputa ọ ga-ekwe omume ịkwọ ụgbọala;
Inye ego inyefe nwere ike ime site n'ikwu okwu, mgbe ị na - arụ ọrụ na onye inyeaka;
Kpọọ akụrụngwa akara;
Ịkpọ ụda ederede ederede;
Ezinụlọ chọrọ maka onye inyeaka, ndị na-azụ ahịa nkịtị.
Ngwaahịa site na Yandex bụ isi dị iche na ndị ogbo ya na e mere ya iji ghọta mmadụ ma kwuo asụsụ ya, kama ịtụgharị uche na ya. A sị ka e kwuwe, rịọrọ arịrịọ zuru oke nwere ike ịchọta ụzọ ọzọ si mba ọzọ, nke na-agaghị ekwu banyere nhazi ha nke okwu, nke "Alice" mere nke ọma.